Champ League Archive - Gool FM - page 4	twitter
Taageerayaasha Real Madrid oo ka soo horjeestay in BBC lagu soo bilaabo kulanka Napoli
(Madrid) 06 Maarso 2017 Intabadan taageerayaasha kooxda Real Madrid ayaa mucaaraday in weerarkooda BBC lagu soo bilaabo kulanka adag ee ay u safrayaan Napoli.
Real Madrid ayaa 3-1 uga soo adkaatay kooxda Napoli lugtii hore, waxayna ku dadaalayaan inay u soo gudbaan wareega 8-da habeen dambe.
Ronaldo iyo Bale oo ka maqnaa kulankii Eibar ayaa dib ugu soo laabtay tababarka kooxda, laakiin taageerayaasha ayaa ka soo horjeestay in weerarka BBC lagu soo bilaabo kulanka Napoli.
AS ayaa ra’yi uruurin ka dhex samaysay taageerayaasha Real 
“Kulanka Arsenal nooma ahan kulan saaxiibtinimo” – Franck Ribery
(Munich) 06 Maarso 2017 Laacibka kooxda Bayern Munich ee Franck Ribery ayaa ka hadlay kulanka lugta labaad ee kooxdiisu ay habeen dambe u martin doonto kooxda Arsenal.
Bayern Munich ayaa 5-1 ku soo garaacday dhigeeda Arsenal kulankii lugta hore, fursada kooxda reer ingiriis ayaana ah mid aad u yar.
Franck Ribery ayaa sheegay in kulankaas uusan kooxdiisa u ahayn kulan saaxiibtinimo maadama 90% ay u muuqdaan koox u soo gudubtay wareega 8-da.
“Kulanka lugta labaad ee Arsenal nooma ahan kulan saaxiibtinimo, waxaan ka hortagi doonaa 
Manuel Neuer oo shaki laga muujinayo inuu taam u noqon karo kulanka Arsenal
(Munich) 06 Maarso 2017 Tababare Carlo Ancelotti ayaa wajahaya dhibaato kadib markii shaki lagaliyay in goolhaye Manuel Neuer uu taam u noqon karo kulanka Arsenal.
Bayern Munich ayaa habeen dambe marti u noqon doonta kooxda Arsenal oo ay 5-1 uga soo adkaadeen lugtii hore, shaki ayaana ku jira in Manuel Neuer uu taam u yahay kulankaas.
30 jirka reer Jarmal ayaa ku dhaawacmay kulankii kooxdiisu ay 3-0 uga adkaatay sabtigii kooxda FC Koln, lamana xaqiijin karo inuu ka hortagi doono Arsenal.
Bild ayaa daaha ka qaaday 
Garsooraha dhex dhexaadin doona kulanka Napoli iyo Real Madrid oo la magacaabay
(Europe) 05 Mar 2017. UEFA ayaa ku dhawaaqday garsooraha dhex dhexaadin doona kulanka Napoli iyo Real Madrid ee lugta labaad wareega 16-ka Champions League.
Lugtii hore ee ka soo dhacday Bernabeu waxaa 3-1 ku soo adkaatay kooxa cad cadka.
Gasrooraha reer Turkey ee Cuneyt Cakir ayay UEFA u wakiilatay inuu garsooro is araga labaad ee kooxahan ee ka dhici doona Stadio San Paolo usbuuca soo socda.
40-jirkan ayaa taariikh ku leh bixinta deg dega ee kaararka cas oo ay ka mid tahay mar 
“Napoli way awoodaa inay reebto Real Madrid” – Fabio Capello
(Napoli) 03 Maarso 2017 Tababaraha reer talyaani ee Fabio Capello ayaa rumaysan in kooxda Napoli ay reebi karto dhigeeda Real Madrid oo 3-1 uga soo adkaatay lugtii hore.
Fabio Capello ayaa sheegay in kooxda Real Madrid ay tahay koox aan la loodin karin haddii dhamaan ciyaartoydeedu ay taam u yihiin.
Laakiin wuxuu cadeeyay in Real Madrid ay dhibtooto marka ay ku ciyaarayso meel ka baxsan garoonkeeda taas oo fursad fiican u ah kooxda ka dhisan koofurta talyaaniga.
“Kulankaas ma ahan mid u fudud Napoli gaar 
(Yurub) 23 Feb 2017 – Shabakadda ciyaaraha ee Goal.com ayaa qalinka u qaadatay oo shax ka sameysay kooxdii ugu fiicnayd lugta hore ee wareegga 16-ka Champions League.
Kulamada lugta hore ee wareegga 16-ka Champions League ayaa xalay la soo gabagabeeyay, iyadoo goolal cajiib ah iyo natiijooyin yaab leh ay ka soo baxeen, waxaana shaxda kooxda ugu fiican lugta hore ee 16-ka Champions League hoggaaminaya Aguero, Di Maria iyo Toni Kroos.
Real Madrid ayaa shaxdan xiddigaha ugu badan ku yeelatay waana 3 ciyaaryahan, 
Sidoo kale kooxda ugu xun 